Fikononkononana fanonganam-panjakana : miatrana ny mpitandro filaminana, nambenana i Mahazoarivo, sy ny TVM/RNM Anosy | NewsMada
Fikononkononana fanonganam-panjakana : miatrana ny mpitandro filaminana, nambenana i Mahazoarivo, sy ny TVM/RNM Anosy
Par Taratra sur 19/05/2016
Araka ny loharanom-baovao azo antoka, niatrana am-bava basy, hatry ny omaly tolakandro, ny tobi-miaramila rehetra. Nambenana mafy ny lapan’ny Primatiora eny Mahazoarivo. Voahodidina sy tsara ambin’ny mpitandro filaminana koa ny RNM sy TVM, Anosy. Nandeha be ny feo amin’ny hoe fisian’ny fikononkononana fanonganam-panjakana.
Niantrana am-bava basy ny miaramila rehetra, nanomboka omaly, tolakandro. Narovana mafy ny RNM sy TVM. Niely ny feo omaly, ny amin’ny fikasana hanongam-panjakana. Tonga hatramin’ny filazana fa nisy andiana miaramila mikasa haka ny primatiora sy ny TVM ary ny RNM. Taorian’izany vaovao izany, nohamafisina avy hatrany ny fiarovana teny an-toeran ka marobe ireo miaramila niatrana teo amin’ny haino aman-jerin’ny fanjakana, mandeha fiara sy mijanona teo Anosy. Vitsy ihany anefa izany amin’ny andavanandro.
Hatrany amin’ny lapan’i Mahazoarivo, nohamafisina koa izany. Raikitra ny fisavana omaly, hariva teny amin’ny manodidina an’Ambohitsoa sy Fenomanana iny.
Fantatra ihany koa rehefa nanontaniana ny tompon’andraikitra eo anivon’ny mpitandro filaminana fa nohamafisina ny fiambenana ireo andrim-panjakana rehetra sy ny faritra mena, ary efa miantrana koa ny any an-toby rehetra.
Raikitra ny fisavana teny Mahazoarivo sy ny manodidina
Nilaza ny tompon’andraikitra eo anivon’ny zandary rehefa nantsoin’ny mpanao gazety an-telefaonina omaly, fa efa resaka mandeha foana ny fanonganam-panjakana, kanefa tsy maintsy atao ny fanamafisana ny fiarovana. Ny teo anivon’ny miaramila nilaza fa fiomanana amin’ny tampoka mety hiseho ny azy ireo.
Tetsy andaniny, nisy ireo andiana miaramila fantatra fa tsy faly tamin’ny fametrahana ny Cemgam vaovao, ka nitrangan’ny fimonomononana teo anivon’izy ireo. Niainga teo ny resaka ny amin’ny fisian’ny andiana miaramila mikonokonona hanao zavatra hafahafa. Mandritra izany rehetra izany, nandeha toy ny isan’andro ny TVM/RNM, toy ny vaovao ary tsy naneho ny fiahiahiana. Tsy eto an-toerana koa anefa ny filoha Rajaonarimampianina fa any Singapour, raha namita iraka any Ambanja ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, omaly.
Mifandray amin’ny maha eto an-dRajoelina ny raharaha ?
Manoloana izany, tsy mazava ny ao ambadik’izao mety ho fikasana hanongam-panjakana izao. Na izany aza, fomba fiady sy efa fanaon’ny mpitondra koa anefa, mba hampiakarana kokoa ny fitiavan’ny vahoaka ny mpitantana ny fanelezana feo sy ny fanehoana hetsika amin’ny fikasana hanongam-panjakana. Efa nanao izany matetika ny fitondrana Tetezamita. Sarinady sa tena izy ity indray mitoraka ity ? Azo ampifandraisina amin’ny maha eto an-toerana ny mpanorina ny Mapar sy ny TGV koa ny raharaha ? Nanambara ny hiverina eo amin’ny fitondrana ny tenany herinandro vitsy lasa izay.
Ankoatra izany anefa, mety misy andiana olona na miaramila tsy faly tokoa manoloana ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Eo ireo fitakiana sendikaly manao tohivakana ; ny olan’ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana ; ny kolikoly mihanaka sy mahazo vahana hatrany an-tampony ; ny fiakaran’ny vidim-piainana ; ny delestazy ; ny olan’ireo mpivarotra…
Araka izany, tsy misy mahazo tombony amin’ny hikorontanan’ny firenena intsony eto.
Efa mazava rahateo ny nambaran’ny vahiny, toy ny sekretera jeneralin’ny ONU, Ban Ki-moon herinandro lasa, fa tsy azo ekena ny fanonganam-panjakana. Nanimba zavatra maro koa izany, raha ny nambaran’ny Amerikanina, omaly.
Tokony hampandinika ny mpitondra koa anefa izany rehetra izany sy ireo olana sy fitakiana samihafa ireo… Mba tsy hipoaka ny sarom-bilany sy ny basy ?
Yves S. sy Synèse R.